Papa Fransoa - Nanamafy ny ady amin'ny kolikoly
Publié septembre 9, 2019 par Book News
Nifarana omaly ny fitsidihana apostolika nataon’ny Papa Fransoa teto Madagasikara. Naharitra telo andro izany fitsidihana izany, ary nanamarika izany ny lamesa lehibe teny Soamandrakizay, omaly.
Nifarana omaly ny fitsidihana apostolika nataon’ny Papa Fransoa teto Madagasikara. Fitsidihana izay naharitra telo andro. Ankoatra ny fanompoam-pivavahana lehibe niarahana tamin’ny mpino an-tapitrisany teny Soamandrakizay omaly dia anisan’ny nanamarika ny dian’ny Papa Fransoa ihany koa ny fihaonany tamin’ny Filoha malagasy sy ny Masoivoho vahiny ary ireo Fiarahamonim-pirenena teny amin’ny Lapan’i Iavoloha.
Olona an-tapitrisany no tonga nanatrika ny lamesa lehibe teny Soamandrakizay, omaly. cc : Tiasy
Nanamafy ny Papa nandritra ity andro faharoa ny fitsidihana ity fa « mampitombo ny fahasamihafana ara-tsosialy sy ny fanilikiliana ny areti-maharitry ny kolikoly ». Nasiany resaka ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana. Nilaza izy fa « tandindonin-doza ny ala nohon’ny fandravana azy. Tsy misy asa mivaingana raha tsy ampidirina ao ny rariny sy ny hitsiny ».
Nanamafy ny veliranony ny Filoha Rajoelina
Fihaonan’i Papa Fransoa tamin’ny Filoha malagasy sy ny Masoivoho vahiny ary ireo Fiarahamonim-pirenena teny amin’ny Lapan’i Iavoloha ny sabotsy teo. cc : Photo d’illustration/Pixabay
Etsy an-daniny, naneho ny fahavononany hanarina ny Firenena ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nilaza ny Filoha nandritra ny kabary nataony teo anatrehan’ny Papa Fransoa sy ireo rehetra nanatrika ny fihaonana teny Iavoloha fa « anisan’ny iraka voalohany efa nekeko ny fanalana ny fahasahiranan’ny vahoaka ».
Ankoatra izay dia nisy ny fambolen’ny Pape sy ny Filoha « baobab » nandritra ny famaranana ny fotoana teny Iavoloha.